Ndị Naijiria chọrọ aha ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị amachiri ịnweta akwụkwọ ikike visa US · Global Voices n’asusu Igbo
Atum vootu nke afọ 2019 jupụtara na mmerụ ahụ na mmaja.
Translation posted 29 September 2020 20:18 GMT
Onyeịsị ala mba US bụ Donald J. Trump na Onyeịsị ala Naịjirịa bụ Muhammadu Buhari. Onye osee fọtọ White House bụ Andrea Hanks sere ya na ụbọchị iri atọ nke ọnwa Eprel na afọ puku abụọ na iri abụọ(public domain).
@feathersproject kedụ ka ndị mba US ga-esi a mara ndị mere wụrụ wụrụ nke a? E chebere maka nke a kemgbe etinyere link ahu. Ọ bụ ndị mmadụ ka ndị gọọmenti sị na ha mee wụrụ wụrụ ka ọ bụ site na aka ndị nọ na ọchịchị ka esi mee wụrụ wụrụ nke a?
Igbe Kampen ọnyeịsị ala Naịjirịa bụ Muhammadu Buhari mere na akụkụ ụzọ na ụbọchị iri abụọ na asatọ nke ọnwa Febrụwarị na afọ puku abụọ na iri na ịse: Onye sere foto a bụ Clara Sanchiz/RNW na Flickr (CC BY-SA 2.0)
Ụzọ ọzọ aga eji nweta akwụkwọ ebe e dere aha ndị dara iwu a bụ nke a, e nwekwara ike ịhụ ya na nkọwa ndị iri asaa na abụọ nke ndị gọọmenti obere ya na na aka ndị mba ụwa lebara anya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke iri na isii nke ndị Naịjirịa kpọrọ site na aka ndị na ahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Naịjirịa nke aha ya bụ Independent National Electoral Kọmishon (INEC).
E gburu ihe dịka mmadụ ịrị anọ na asaa na ụbọchị ịrị abụọ na atọ nke ọnwa Febrụwarị, nke bụ ụbọchị e mere ndọrọ ndọrọ ọchịchị Onyeịsị ala, site n'ihe Ụlọ Ọnọdụ kwụrụ, nke bụ otu jikọtara ndị otu ụlọ ọru na ahụ maka ndị mmadụ ma n'elebakwa anya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Naịjirịa.
Ndị otu ụlọ ọrụ EU electoral observer mission kwupụtara na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị Naịjirịa mere jupụtara n'ihe mmerụ ahụ ya na mmaja ndị bịara ịtụ vootu na usa nchọpụta ha na Julaị afọ puku abụọ na iri na itenanị “Ndị ọrụ nchekwa ndụ na akụnụba nke Naịjiria bụ nke ha na ebo ebubo na ha na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị gwụkoro na otu akpa nke a mere ha ji soro ná emerụ ndị mmadụ ahụ.
Ndị nlebanye anya EU bịara oge ana-ekpokota akwụkwọ akara e jiri zoo vootu wetara akụkọ mmaja nke e kwụrụ na ọ sịna aka ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ INEC nke metụtara steeti iri abụọ. ” ndị nlebanye anya EU nke e tinyere na Abuja, nke bụ ịsị ala, ya na steeti ịrị atọ na isii nke Naịjiria.
Usa ndị EU nyere nchọpụta nke ha ndị otu ụlọ ọrụ Nigeria International Election Observation Mission gụnyere National Democratic Institute (NDI) ya na International Republican Institute (IRI), ma ndị nọ na mba US, otu na abụghị otú Pati, na ndị ọrụ akwụ sonyere.